Kaka Oo Sheegay Inuu Ku Biiri Doono Kooxaha Maraykanka Ee Horyaalka MLS
HomeSuuqaKaka Oo Sheegay Inuu Ku Biiri Doono Kooxaha Maraykanka Ee Horyaalka MLS
Xidiga kooxda AC Milan iyo qaranka Brazil ee Kaka ayaa daboolka ka qaaday inuu xiisaynayo ku biirida kooxaha ka dhisan Maraykanka ee horyaalka MLS kadib marka uu dhamaado sii joogista garoonka San Siro.
Laacibkan reer Brazil, oo uga soo wareegay naadiga Rossoneri xagaagii hore kooxda Real Madrid, ayuu u ahaa kulankiisii 300 aad ee uu ka dhex muuqdo Milan, ciyaartii xallay ee ay la ciyaartay kooxda Chievo.
In kastoo uu sheegay inaanu qoomamaynayn go’aankii ku soo celiyey Milan maadaama ay xaalad xun ku sugan tahay imika, hadana wuxuu dhinaca kale carabaabay inuu damacsan yahay inuu xagaagan marka la gaadho xamaantiisa ka urursado naadiga – jecel yahayna inuu u wareego qaarada woqooyiga America marka uu ka tago Sansiro.
“Wax qoomamo ahi igama hayso go’aankii aan ugu soo noqday Milan,” ayuu ku yidhi warfidiyaha Corriere della Sera. “Noloshay kamid tahay inaad khibrad urursato wakhtiyada xaaladu kugu adkaato, koox kastaana xaalad wey soo martaa, Milana imika ayay maraysaa marxaladaas adag. Ma filayo in [Clarence] Seedorf uu isagu ka masuul yahay mashaqadan haysata kooxda, laakiin Clarence wuxuu wali ku jiraa bilow ( tababarenimada ).
“Mustaqbalka waxaan jeclahay inaan ka ciyaaro qaarada America. Marka xili ciyaareedkani dhamaado , waxaan kala hadli doonaa Adriano Galliani waxa uu ka damacsan yahay kooxda ee uu ku fikirayo. Haddii ay noqoto inaan ka tago naadiga, markaa waxaan jeclahay inaan u diga rogto wadanka Maraykanka kooxihiisa.”
Kulamada saaxibtinimo ee caawa xulalku ay ciyaarayaan iyo xilliga laga daawan doono geeska Afrika